KIA , OPTIMA ( GT ) , 2018 , YGN – Super Seven Stars
KIA , OPTIMA ( GT ) , 2018 , YGN
Interior Color WK ( Red )
Warranty Expiry Date 05 . January . 2023
ပြောင်လက်သစ်လွင်သော ဒီဇိုင်းအသွင်အပြင်ဖြစ်ပါသောကြောင့် လမ်းမထက်တွင် စီးနှင်း သွားသည့်အခါတိုင်းစတိုင်ကျခေတ်မှီနေစေမှာဖြစ်သည့် KIA_Optima _GT Line
KIA ရဲ့နာမည်ကျော် Signature တစ်ခုဖြစ်သည့် Tiger Nose Grille ရှဲလ်ကိုလည်း ခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်း ပိုမိုဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲဖန်တီးထားသည့်အပြင် ကား Body မှာလည်း ပိုမိုရှည်လျားကျယ်ပြန့်ပြီး လေခွင်းအားပိုမိုကောင်းစေသောကြောင့် တွေ့မြင်လိုက်ရုံဖြင့် Latest မော်ဒယ်မှန်း သိသာထင်ရှား ဆန်းသစ်နေစေမှာဖြစ်ပါသည်။
အဆင့်မြင့် Button Starter ဖြစ်သောကြောင့် စက်နိုးရာတွင်သာမန် Key များလို အချိန်ကြာမြင့်စွာ လှည့်နေစရာပဲ
အလွယ်တကူထိတွေ့ရုံဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်ပြီး စက်သတ်ရာတွင်လည်းအလွယ်တကူထိတွေ့ရုံဖြင့် စက်သတ်နိုင်ပါသည်။
KIA , Optima သည်ပျမ်းမျှတစ်ဂါလံလျှင် မြို့တွင်း မိုင် 20 မှ မြို့ပြင် မိုင် 30 အထိမောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်.
6 Speed Auto Transmission ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်…….
အတွင်းခန်းထိုင်ခုံများမှာ အကောင်းစား Leather seat များဖြစ်သောကြောင့်ရိုးရိုး cloths seats ထက်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာသွားလာနိုင်သည့်အပြင်မတော်တဆ ကားပေါ်တွင် ဖိတ်စင် စွန်ထင်းခြင်းများကို အလွယ်တကူ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်ခြင်းနှင့် အနံအသက် ဆိုးများထွက်ခြင်း မှလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Paddle Shifters , Cruise control နှင့် Bluetooth Hand-free System များပါဝင်သည့် D-Shape Steering Design
ကားမောင်းသူ၏အရပ် အနိမ့်၊အမြင့် ခန္ဓ္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားအပေါ်မူတည်၍ ထိုင်ခုံကို လိုအပ်သလို အနိမ့်၊အမြင့်၊ရှေ့တိုး၊နောက်ဆုတ်ပြုလုပ်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ခါးအနေအထားကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင်သော်လည်းကောင်း၊ကျောမှီအနေအထား၊ခြေသလုံးအနေအထား နှင့် ဦးခေါင်းအနေအထားတို့ကိုလိုက်၍ရှေတိုးနောက်ဆုတ်ပြုလုပ်ခြင်းစသည်တို့ကို စိတ်တိုင်းကျလိုအပ်သလို ချိန်ညှိနိုင်သည့်အပြင် မိမိတို့စိတ်တိုင်းကျချိန်ညှိထားသော အနေအထားကိုပါ Memory မှတ်ထားနိုင်သည့်အတွက်လည်းသက်သောင့်သက်သာလွယ်ကူအဆင်ပြေစွာသွားလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Blind Spot Detection စနစ်ဟာဆိုရင် မမြင်နိုင်သော နေရာများမှရောက်ရှိလာမည့် အရာ များကို အာရုံခံပေးသောစနစ်ကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့်ဘေးနှင့်အ နောက်ဘက် တို့မှမိမိ ယာဉ်ကို ကျော်တက်လာစဉ်အတွင်း နောက်ကြည့်ဘက်မှန်မှမိမိတို့သိရှိ စေသောကြောင့် အန္တရာယ်ကင်းကင်းနှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာမောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။
Harman/Kardon Premium Sound System ထည့်သွင်းထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ထူးခြားအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အသံ Quality ကို ခံစားရရှိစေမှာဖြစ်သည့်အပြင် Speaker 10 လုံးပါဝင်ပြီး Surround Sound ဖြစ်သည့်အတွက် Music အသံမည်မျှပင် ကျယ်လောင်စွာဖွင့်ထားသော်လည်း ထူးခြားအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် အက်ကွဲမှုလုံးဝမရှိသည့် Bass Quality တို့ကို ထူးခြားစွာခံစားရရှိနိုင်မှာဖြစ်သည့်အပြင် ကားအတွင်း အသံလုံစနစ်ကောင်းမွန်မှုကြောင့် Recording Studio များတွင် ဖွင့်ထားသကဲ့သို့ ရသကိုပေးစွမ်းနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါသည်။
Bi-Xenon Headlamp ဖြစ်သောကြောင့် ပုံမှန်ထက်အလင်းအားပိုမိုကောင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
KIA ၏ နာမည်ကျေ် Shine_Bright_Design နှင့် LED Rear Lamps
Sporty ဆန်ဆန် Design နှင့် Chrome muffler Dual Exhaustပါဝင်သောကြောင့် လူငယ်များအကြိုက်တွေ့စေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။